Gyazo, barnaamij lagu soo qaado shaashadda oo si otomaatig ah loogu sudho webka | Laga soo bilaabo Linux
Channels | | Aplicaciones
Waad salaaman tihiin, waan idin soo bandhigayaa Gyazo, softiweer ruqsad ka haysta Ruqsadda Guud ee Dadweynaha karti u leh inuu qaado shaashadaha shaashadda oo uu si otomaatig ah toos ugu galiyo.
Barnaamijku waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Waad socodsiisaa oo waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa xulashada aagga shaashadda aad rabto inaad qabato.
Ka dib markaad sidaas sameyso, biraawsarkaagu wuxuu si dhakhso leh ugu furi doonaa sawirka si otomaatig ah loogu dhejin doono server-yada gyazo.
Sawirkaas kumbuyuutarku waa mid gaar ah, taas oo ah, qofna ma arki karo naftaada iyo dadka aad la wadaagto mooyee.
Waxay sidoo kale kuu abuureysaa galka taariikhda sawirada aad rarisaysey.
Websaydhkeeda waxay ku siineysaa ikhtiyaarka aad si toos ah ugula wadaagi karto shabakadaha bulshada ama si fudud ula xiriir URL-ka sawirka.
Haddii aad rabto inaad sawirka si toos ah ugu dhejiso adigoon shabakada gyazo la arkin, tusaale ahaan inaad si toos ah ugu soo bandhigto goob fagaare ah, ku dar dhammaadka cinwaanka ay bixisay Gyazo .png
Waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijka bogga rasmiga ah, labadaba koodhka ilaha iyo xirmada .deb ee loogu talagalay Debian iyo Ubuntu:
Adigoon ku sii dheeraanin, waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso - waa bilaash- waxaana rajeynayaa inay waxtar kuu yeelan doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Gyazo, barnaamijka lagu soo qaado shaashadda oo si toos ah loogu dhejiyo shabakadda
mmmmmmm ,,, intee in le'eg ayaan maraynaa? ,, Marka way adagtahay in la sameeyo iyada oo daboolka laga saaran yahay oo la soo dejinayo ??? laakiin si kastaba ha noqotee, qof walba oo halkaas jooga
Ma fahmin sida hal ikhtiyaar oo kale kuu dhibi karto. Sikastaba, qof walba. Waad ku mahadsantahay wadaagida, Kanaalada.
Sidaas wanaagsan, wax ka beddelka url, runti weligay iguma soo dhicin,
Hagaag, way i dhibtaa, taasi waa sababta aan u isticmaalay shaashadda, ma doonayo inaan waqti ku lumiyo anigoo raadinaya martida loo soo dirayo.
Uguyaraan, waxaad keydisaa tallaabada dheeriga ah ee aad ugu shubtid shabakadda. Adiga laftiisa, waxaad ku dishaa laba shimbirood hal dhagax.
Waa dhif iyo naadir in lagu dhibaateeyo ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo shatiyeysan oo loo yaqaan GPL. Haddii aad keydiso tallaabo, horayba waa waxtar in la horumariyo wax soo saarka
Faa'iido leh dijo
Tan waxaan u aqaanaa Screencloud, waa qaab-dhismeed badan, oo bilaash ah ... laakiin ma ogi haddii ay tahay GPL ... si aan u arko haddii ay qof u shaqeyso ama ay ogtahay.
Aniga ahaan xulashadan ayaa ah mid aad ufiican oo sifiican ula dhexjirta desktop kasta oo LiGNUx ah oo aan isku dayay.
Weli ma diidayo inaan isku dayo Gyazo kaliya xaqiiqda ah inuu yahay GPL 😉
Ku jawaab Nützlich
Kuwa doonaya bedel kale oo KDE ah, saaxiibka EOL wuxuu i siiyay ikhtiyaar aan ku rakibo kipi-plugins-ka isku dhex jira Ksnapshot iyo Gwenview ikhtiyaarka ah in si toos ah loogu wadaago server-yada muuqaalka kala duwan.
XFCE waxaa kujira xfce4-shaashadda shaashadda.
Faa'iidada aan ku arko Gyazo waa inay ka raaxeysan tahay maxaa yeelay waxay si toos ah kuu oggolaaneysaa inaad doorato aagga shaashadda si aad u qabato oo aad u soo geliso.
Halkaas weynaanta software-ka bilaashka ah, beddelka dhammaan dhadhanka!
Waan saxayaa: Kipi-plugins-ka isku dhafan ee KDE waa mid raaxo leh sida Gyazo. Ma aanan ogeyn inay sidoo kale leedahay ikhtiyaar ay ku qabato aag leydilaad ah sida gyazo oo kale. Markaa waa inaad doorataa inaad u dirto serverka tusaale ahaan imgur oo aan u baahnayn diiwaangelin.
Runtu waxay tahay in dadka isticmaala KDE, Kipi-plugins-ka ay yihiin kuwa ugu badan ee isku dhafan, in kastoo gyazo weli ay tahay ikhtiyaar kale oo wanaagsan. Dooro midka aad ugu jeceshahay! 😀
Waxaan isticmaali jiray kipiins-ka, laakiin waxaan ogaaday inay aad u gaabis yihiin, markaad rabto inaad ka soo rarto ksnapshot.
Runtu waxay tahay in kiimikada kipi-ka ay qaadanayso waqti ka dheer kan gyazo, in kasta oo dhanka kale ay si aad ah ugu dhex jiraan KDE. Maaddaama wax walba ay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo waxyeellooyinkooda, kala duwanaanta awoodda! 😀
Runta ayaa ah waxaan ahay hal talaabo oo dheeraad ah:
Waxaan isticmaalaa kaamirada android-kayga waana diyaar
waad ku mahadsantahay boostada.
Waxaan ubaahanahay qoraallo ama wax ii ogolaanaya inaan shaashadda qabsado oo aan sawirada ku keydiyo galka.
Waan ku qanacsanahay in 1 daqiiqo kasta shaashadda la qabto waxaana keydsadaa sawirka galka deegaanka.
ml mahadsanidiin kahor
Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta III)